एउटा तस्वीर पनि खिचिहालौं न !
कँग्रेसम्यान तथा अमेरिकका चर्चित राजनीतिज्ञ पिटर किंगका साथमा अमेरिकका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी केशव सेडाई । पिटर किंगले न्युयोर्कको सेकेण्ड कँग्रेसनल डिस्ट्रिक्टको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पिटरको चुनावी सहयोगको कार्यक्रमका क्रममा
पशुपतिनाथमा शिवरात्री फिवर, बाबाजीका स्वरुप ! (फोटो फिचर)
गेरु बस्त्रले लाज मात्र ढाकेका बाबाजीलाई जाडोको कुनै पर्वाह छैन । ६ फुटको च्यादर ओछ्याएर ‘शिवजी पोज’मा बसेका छन्, एक हातले त्रिसुल अठ्याएर ।उनको छेवैमा मुढो जलिरहेको छ । त्यसलाई
तस्विरमा पहिलो चरण अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको निर्वाचन
पहिलो चरण अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको निर्वाचन सकिएको छ । विहान सातबजेबाट शुरु भएको मतदान साँझ ५ बजे सकिएको हो । केही छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन शन्तिपुर्ण भएको निर्वाचन आयोगले
बाल्यकालमा यस्ता थिए प्रकाश दाहाल (६ तस्विर )
दिवंगत प्रकाश दाहालका बाल्यकालका केही तस्विरहरु खसोखासका पाठकका लागि ।
संसदको अन्तिम दिन सामुहिक फोटो सेसन (फोटो फिचर)
आज संसदको अन्तिम बैठक बस्नु अगाडि सांसदहरुले फोटो सेसन गरेका छन् । प्रस्तुत छ अन्तिम बैठक अगाडि खिचिएका केही तस्विर । फोटो : रत्न श्रेष्ठ / रासस
तस्विर : बिक्रम खत्री गैरआवासीय नेपालीहरुले आज स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथमा विशेष पूजाआजाका साथ एनआरएन डे मनाएका हुन् । गैरआवासीय नेपाली संघले हरेक वर्ष अक्टोबर ११ लाई गैरआवसीय नेपाली दिवस (एनआरएन
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचको सहमति घोषणा कार्यक्रममा नेताहरुको ‘बडी ल्यांग्वेज’
मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकताबोधसहित नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नयाँ शक्ति नेपालबीच चुनावका लागि तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ
सोमबार अमेरिकी आकाशमा देखिएको सूर्यले केहीबेर हिराको औंठीको आकार लियो । खग्रास सूर्यग्रहणका कारण आकाशमा देखिएको सूर्य केहीबेर हिराको औंठीको आकारमा देखिएको थियो । सूर्यलाई चन्द्रमाको छायाले पूर्णरुपमा छेकिसकेपछि छायाँ